Falaqeynta Hordhaca kulanaka Barcelona vs Manchester United lugta Labaad ee Champions League – Walaal24 Newss
Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku booriyay kooxda inay xusuusato kulankii guusha ay ka gareen PSG, sheegayna in Manchester United ay u isticmaali doonto qaab ciyaareedkeeda caanka ah ee ay uga adkaatay PSG, ayna dhiiri galiso guushii 1-0 ay Barcelona ku badisay lugta koowaad ee wareega 8da Champions League.
Solskjaer ayaa sheegay in guusha ay gaareen guushii ay ka gaareen kooxda heysata horyaalka Faransiiska ee 16kii sanno ee ugu danbeysay inay ka caawin doonaan inay dalabkooda ka soo qaataan Nou Camp caawa oo talaada ah.
“Xusuusta ka imaaneysa guushii aan ka gaarnay PSG ayaa caawin doonta ciyaartoyda” ayuu Solskjaer u sheegay shirkiisa jaraa’id ee ciyaarta ka hor. “Waxay naga caawin doontaa sidii koox ah oo isku dayaysa oo wax waliba ku soo celiso.
“Waan ognahay in Barcelona ay ku jirto Nou Camp waa wax aad u adag, laakiin xasuusta habeenkii guusha PSG ayaa la noolaan doonta ciyaartoyda, ma ahan waqti dheer, anigana hal gool ayaan heysanaa.”
Kulanka oo soo galaaya saacada Geeska Afrika marka ay tahay: 10:00 PM oo Caaw ah.
“Ciyaartu waxay calaamad u tahay Solskjaer oo ku soo laabtay garoonka, markii aan dhaliyey goolkii aan u ciyaarayay United kulankii Champions League ee 1999kii ee Bayern Munich”. ayuu yiri Solskjaer
“Dabcan waa xusuus fantastik ah,” ayuu yiri. “Waa waqtiga kaliya ee aan garoonka ku jirey, lakiin xaqiiqda dhabta ah dib uma soo laaban doono habeenkaas, shaqadeyda haatan waa inaan ka ciyaareynaa si ka fiican ciyaarta caawa ee lugta labaad ee Nou Camp.”
Tababaraha kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa sheegay in Lionel Messi uu taam u yahay inuu ciyaaro ka dib markii uu dhaawac ka soo gaaray Chris Smalling lugtii hore.
Lionel Messi iyo dhowr ciyaartoy oo kale oo ka mid ah ciyaartoydii ugu horeysay ayaa la nasasiiyay kulankii barbaraha 0-0 ay la galeen kooxda Huesca ee horyaalka La Liga Sabtidii.
“Messi waa uu fiican yahay ka dib markii uu dhaawac ka soo gaaray islamarkaana wax dhibaato ah qabin ka hor kulanka berri” ayuu yiri Valverde.
Barcelona ayaa isku dayi doonta inay hogaamiso United ka hor inta aysan taageeradooda ku helin, sida laga soo xigtay goolhaye Marc-Andre ter Stegen.
Waxa uu yiri: “Dabcan waa muhim in aad nadiifin kartid, laakiin waa inaan ku ciyaarnaa waxyaabo badan oo shakhsi ah, sida had iyo jeer, islamarkaana aan u ciyaarno.”
Alexis Sanchez iyo Nemanja Matic ayaa qeyb ka ah 22 ciyaaryahan oo Manchester United ah oo u safray Barcelona ka hor kulanka wareega 8da ee Champions League.
Sanchez ayaa kahor imaanaya kooxdiisii ​​hore ka dib markii uu ka soo kabsaday dhaawac jilibka ah.
Barcelona, ​​Lionel Messi iyo Sergio Busquets ayaa la nasasiiyay kulankii Huesca sabtidii ka hor Champions League.
Sergi Roberto iyo Ivan Rakitic ayaa la filayaa inay ku soo laabtaan line-upka ka dib markii ay ka soo kabsadeen dhaawacyo. Ousmane Dembele ayaa mar kale taam u ah inuu ciyaaro ka dib markii uu bedel aan la isticmaalin lugtii hore.
70kii jeer ee hore ayaa koox guuleysatay Champions League markii ugu horeysay ee ay gurigeeda ku ciyaaraan, kaliya afar kaliya ayaa laga reebay (6 boqolkiiba).
Si kastaba ha ahaatee, labo ka mid ah xaaladahaan ayaa ku jiray tartanka xilli ciyaareedkan, oo ay ku jirto hal mar Manchester United.
Barcelona marnaba maluminin kulan ay gurigeeda ku ciyaaraan, Man Utd tartamada yurub, kulankoodii ugu danbeeyay ee sidaasi oo kale ah 0-0 bishii April 2008.
Barcelona ayaa ka soo kabsatay 39 ka mid ah 41 kulan oo ay ciyaareen tartamada oo dhan, lakiin waxa ay ka maqnaayeen FC Koln 1980-81 UEFA Cup, iyo Metz oo ka tirsanaa 1984-85 Cup Winners ‘Cup.
Manchester United ayaa ka soo baxday mid ka mid ah afarteedii kulan ee ay horay u ciyaartay kooxaha Yurub, lugtii hore ee gurigeeda looga badiyay, inkastoo ay aheyd wareega ugu danbeeyay ee ay la ciyaarayeen Paris Saint-Germain guulna ay ka gaareen.
Barcelona ayaan laga badin 30 kulan oo ay garoonkeeda ku ciyaartay gurigeeda, waana tartanka ugu dheer ee tartankaan lagu qabto.
Sidoo kale ma aysan helin wax ka badan hal jeer mid ka mid ah 30 kulan (15 gool wadar ahaan) tan iyo markii guuldarro 0-3 ah ay ka soo gaartay Bayern Munich semi-finalka 2012-13.
Boqolkiiba 90 ka mid ah goolasha Manchester United ee Champions League xilli ciyaareedkan ayaa ka yimid guriga (9/10). Si kastaba ha ahaatee, Red Devils ayaa badisay kaliya hal kulan oo ka mid ah shantii kulan ee ugu danbeysay ee ay marti ahaayeen tartamada.
Guuldaradii ugu horeysay ee Manchester United waxa ay ku guuldareysatay inay iska diiwaan galiso hal gool oo lagu bartilmaameedsanayo markii ugu horeysay ee Champions League tan iyo bishii March 2005 (0-1 vs Milan).
Manchester United ayaa laga badiyay 49 kulan oo Champions League ah, waxaana ay noqon karaan kooxdii sagaalaad ee koox kale oo 50 kulan oo isku xigta ku guuleysatay tartankaan, kaliya waa kooxdii labaad ee Arsenal (Arsenal, 53).
Lionel Messi ayaa dhaliyay 22 gool 31 kulan oo uu Champions League ka horyimid kooxaha Ingariiska, waana in ka badan ciyaaryahan kasta oo tartanka ku jira.
13 ka mid ah weeraryahanadaasi ayaa yimid sagaalkii kulan ee ugu danbeysay ee ay ka horyimaadeen kooxaha Ingariiska ee Camp Nou, oo ay ku jirto seddexleey ay ka dhaliyeen Arsenal (April 2010) iyo Manchester City (bishii October 2016).
Weeraryahanka Barcelona Luis Suarez ayaa heysta rikooro badan isagoo aan shabaqa soo taabaneynin ciyaaryahan kale oo Champions League ah xilli ciyaareedkaan (33).
Mareykanka oo sheegay iney kordhinayaan howlgalada ay ka wadaan Soomaaliya
Shir looga hadlayey Bur-burinta Miinooyinka iyo Walxaha Qarxa oo lagu qabtay magaalada Geneva